'Mena' an'i Igor Piwowarczyk misy hosodoko nomerika | Famoronana an-tserasera
Piwowarzcyk mitondra antsika asa ambony ho an'ny mizana amin'ny volavolan-doko izay napetraka mifanohitra mba hampitonena sy hitondra antsika amin'ny fiadanam-po. Raha miantso ny hiady sy ny tolona io mena io, misy ny tontolo manodidina an-tanàn-dehibe sy ny gradient of grey ho an'ireo trano rehetra manao ny mifanohitra amin'izany.
Igor Piwowarczyk 'Mena' dia ohatra tsara tahaka asa kanto vita amin'ny sary hosodoko nomerika ary afaka jerentsika ao amin'ny Behance ny finaritra amin'ireo andian-tsary izay manana zavatra itoviana. Manaraka izany, hapetrako aminao ny rohy hahafahanao mahita ity mpanakanto nomerika mahafinaritra ity.
Filentehan'ny masoandro izay mampindrana ny tenany foana alohan'ny fahanginana sy ny fahononam-po toy ny rehefa hitanao fa manjavona eo amin'ny faravodilanitra eny amoron-dranomasina iny ihany ny mena miaraka amin'ny hafanana amin'ny fahavaratra. Piwowarczyk dia mitondra antsika ny sasany amin'ity sary ity amin'ny lohatenin'ity lohateny ity izay mitondra antsika amin'ity taona 2016 ity, efatra andro aty aoriana.
Una sary hianjera amin'ny tongotrao ary izany dia mampiseho amintsika fa ny sary hoso-doko niomerika dia làlana tsara izay mbola lavitra ary tokony hampindrana izany fahendrena rehetra izany nandritra ny taonjato maro avy amin'ny tompon'ny sary.
Ny Behance anao avy eto, ary eo no hahitanao mihoatra ny ity andiany ity izay misy ny fanoharana momba ny vehivavy eo akaikin'ny radio dia manana ny azy ihany koa izy mba hamela antsika hankafy sy hangina kely, hamela antsika hiroboka amin'ny loko volony manomboka amin'ny volondavenona ka hatrany amin'ilay mena izay miantso antsika amin'ny fahalemem-panahy toy izany. Aza ela ny fanarahana azy raha toa ka manana kaonty momba an'i Behance ianao, mpanakanto mpanakanto iray hanaraka izay hanohy hampiseho ny kantony rehetra avy amin'io sehatra lehibe io hahitana mpana sary vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Fahatoniana amin'ny 'Mena' avy amin'i Igor Piwowarczyk